Wiirtuu Odeeffannoo Muslimtoota Oromiyaa – Page 4 – Oromiyaa Muslims Information Center مركزالمعلومات لمسلمي أوروميا
Diddaa barattooti Yuuniversitii Haromaayaa kaasaniin wal qabatee guyyaa har’aa sirni abbaa hirree mootummaa Wayyaanee baraa gara baraatti barattoota mala adda addaan fixuu aadeffate har’as caalmaatti… Read More
The recent riots in Riyadh and Jeddah.
The recent riots in Riyadh and Jeddah by undocumented Ethiopian workers following the ongoing crackdown on expatriates have prompted many Saudi families to fire their… Read More
The Oromo nation is saddened by the death of Musa Bati
>>>>>>>>>The Oromo nation is saddened by the death of Musa Bati, on Wednesday, September 24, 2013, in Nagelle Borana, Southern Oromiya. Musa Bati, who earned… Read More
Koollejiin Minisootaa,USA Afaan Oromoo Akka Barnootaatti Barsiisuuf Qophii Jirti
>>>>>WASHINGTON,DC — Koollejjiin Teknikaa fi Ummataa (MCTC) Fulbaana 24,2013 jalqabee afaan addunyaa 12tti dabaltee Afaan Oromoollee akka barnootaa tokkootti barsiisuuf qophii jirti. Barnoota tokko akka damee… Read More
Hubachiisa cufa Muslima Ethiopia Warri waa Sammuun Isin Yaaddu:
>>>>>Obboleeyyan Keennaa ka biyyatti dhumanii fii dhumaa jiran dhimma dhuunfaa fii Bu’aa isaaniitiif osoo hin taane Amantii keennaaf jedhaniiti ! yeroo ammaa kana kudu’an silaa… Read More